Mudzuri: MDC Ibato Rinoita Zvido zveNhengo Dzaro
Kukadzi 04, 2011
MDC inotungamirwa naVa Morgan Tsvangirai inonzi iri kuronga kuchinja mimwe mitemo inobata sarudzo dzevatungamiriri vanosanganisira makanzura, mameya uye zvigaro zvepamusoro mubato iri.
Mitemo mitsva iyi inonzi ichaiswa patafura kumusangano we congress, uye kana yatambirwa, yoshandiswa musarudzo dzinoitwa mubato iri.
Bepanhau re Zimbabwe Independent rabutsa nyaya inoti zvemitemo izvi zviri kurongwa nebazi rinoona nezvesarudzo mubato reMDC. Studio7 haina kukwanisa kubasa vanotungamira bazi rezvesarudzo, kanawo sachigaro webato iri, VaLovemore Moyo, kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvinonzi veruzhinji vari pasi vanonzi vari kunyunyuta kuti vanhu vari kupedzisira vaita vatungamiri mubato vazhinji vacho vanhu vanenge vasina kushandira bato kwenguva yakareba.
Zvinonziwo vanhu vari kunyunyuta kune vamwe vari kutadza kutungamira zvakanaka kana kuita basa ravakasarudzirwa nekuti vanenge vasina ruzivo kana kuti dzidzo yakakwana kuti vakwanise kutungamirira nekuchinja hupenyu hwevari pasi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa ezvematongerwo enyika mu MDC, Va Elias Mudzuri, avo vari kuronga nezvemusangano we congress, vanoti bato ravo rinoita zvinhu zvinenge zvichidiwa neveruzhinji nekuti ibato revanhu kwete remunhu mumwe chete.
Asi VaMudzuri vati havana ruzivo nezvegwaro riri kutaurwa neZimbabwe Independent rinonzi rakatumirwa kunhengo dzeMDC, vachiti zvose zvinoitwa mubato ravo uye zvinopinda mubumbiro rebato, zvinhu zvinenge zvabva muvanhu..